दार्चुलाबाट भर्खरै आयो यस्तो दुःखद् खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला – List Khabar
Home / समाचार / दार्चुलाबाट भर्खरै आयो यस्तो दुःखद् खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला
दार्चुलाबाट भर्खरै आयो यस्तो दुःखद् खबर ! मन थामेर हेर्नुहोला
admin June 30, 2021 समाचार Leaveacomment 358 Views
काठमाडौं । लास्कुखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा उनीहरु ब’गेर ह्युम पाइपभित्र अ ड्कि एका प्रहरीले जनाएको छ। अ ड्कि एका उनीहरूलाई जेसिभीको सहायताले निकालिएको थियो।
ह्युम पाइपमा अ ड्कि एर मृ’त्युु दुई बालकको भएको छ । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ४ बङ्गाबगड स्थित लास्कु खोलामा रहेको ह्युम पाइपमा अ ड कि एर उनिहरुको मृ’त्यु भएको हो ।
Previous यात्रुसँग बढी भाडा लिने ८ जना काठमाडौँबाट पक्राउ
Next अन्तत : प्रधानमन्त्रीबाट बिदा लिने ओलीको तयारी !